हिम्मत नहारी अघि बढ्ने अञ्जलीलाई सलाम छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
हिम्मत नहारी अघि बढ्ने अञ्जलीलाई सलाम छ
माघ २७, २०७३
हिम्मत नहारी अघि बढ्ने अञ्जलीलाई सलाम छ (फ्रन्टपेज : जन्म पुरुष कर्म महिला) । त्यही संघर्षले गर्दा उनको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा चुलिएको छ ।
साप्ताहिकको यात्रा सन्दर्भमा कालिन्चोकको कुरीलाई पुरी भनिएको रहेछ (यात्रा सन्दर्भ : कुरीमा हिउँको खेल) । ठाउँको नाम गलत भएकाले सच्याउन अनुरोध छ ।
सफलताको मूल मन्त्र सायद यही होला (युवा मन : बानी) । धैर्यता, क्षमता, अनुशासन एवं निरन्तरताले मानिसलाई उचाइमा पुर्‍याउँछ ।
सहिद शब्द नेपालमा एकदम सस्तो भयो । वास्तविक सहिदलाई धेरैले बिर्सिए । सहिदको नाम पैसासँग साटियो । सहिद शब्दको वजन नै घटेजस्तो भयो ।
सुन्दर तस्बिरसहित दोलखाको कुरीका बारेमा पढ्न पाउँदा खुसी लाग्यो (यात्रा सन्दर्भ : कुरीमा हिउँको खेल) । जलस्रोतको धनी जिल्ला दोलखाले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गरोस् । दोलखा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य बनोस् ।
तेरियाजी, यति सानै उमेरमा तपाईंले धेरै प्रगति गरिसक्नुभएको छ । नेपालको नाम चम्काउने काम जारी राख्नुहोला ।
यमबुद्धको भौतिक शरीर नरहे पनि उनका गीत सधैं बाँचिरहनेछन् (चर्चामा : यमबुद्धको आत्महत्याको कारण के थियो ?) । श्रोताहरूले उनलाई कहिल्यै बिर्सने छैनन् ।
नम्रता श्रेष्ठ दुर्घटनामा परेको घटनाले दु:खी बनायो (दुर्घटनामा परिन् नम्रता) । उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।
मोडल सिर्जना पोखरेलले दिएका लभ टिप्स मन परे (लभ मन्त्र) । हो, प्रेममा आपसी विश्वास र सरसल्लाह हुनुपर्छ भने क्षमा पनि दिन सक्नुपर्छ ।
रंगमञ्चमा सरोज खनालको उपस्थिति सशक्त छ (रंगमञ्चमा फर्किए सरोज) । अब चाहिँ नेपालमै सम्भावना खोज्नुहोला । विदेश भासिने काम नगर्नुहोला ।
धेरै राम्रो कुरा (लभ मन्त्र) । अचेलका जोडीलाई यस्तै राम्रो ज्ञानको आवश्यकता छ ।
यो खबर पढेर अचम्म लाग्यो (फर्किए मृत मानिएका वृद्ध) म त छक्कै परें ।
गत अंकको साप्ताहिक राम्रो लाग्यो । यसमा सबै पक्ष समेटिएको छ । यसरी नै पाठकको मन जित्दै जानुहोला— शुभकामना ।
पहिलो विश्वमा जिप्सीका बारेमा समाचार पढेर रमाइलो लाग्यो । नातिसँग (पहिलो विश्व : नातिसँग जन्मोत्सव) बाँदरको आयु पनि ६२ वर्ष लामो हुन्छ र ?
मन छोयो (मुक्त आकाश : मन र दिमाग) । जुन निर्णय लिए पनि पछि यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिहाल्छ । यो लेखमा वास्तविक कुरा समेटिएको छ ।
प्रकाशित :माघ २७, २०७३
जसले रोनाल्डोलाई आँखै अघि देखे
बुद्ध जयन्तीमा गोर्खे सलाम
जर्मनी सजिलै अघि बढ्ने
बढ्ने भो किस जोन
आमयुवाले यसबाट केही सिक्नुपर्छ आश्विन २६, २०७५
मदनकृष्ण श्रेष्ठको अन्तरवार्ताले भावुक बनायो आश्विन २०, २०७५
रेडलाइट एरियाको इतिहास, समाजको यथार्थ आश्विन १४, २०७५
सम्बन्ध सुध्रिएको खबरले खुसी बनायो आश्विन ७, २०७५
परदेशमा प्राय नेपालीको अवस्था दु:खद भाद्र ३१, २०७५
मृत्युदण्डले मात्रै बलात्कारका घटना कम हुन्छन् भाद्र २२, २०७५
ओलीका उखान टुक्काहरूको कलेक्सन रमाइलो भाद्र १६, २०७५
युट्युबले समाज रूपान्तरणका लागि भूमिका खेलोस् भाद्र ९, २०७५
प्रेमबहादुरजस्तै अन्य नेपालीले दु:ख भोग्नु नपरोस् भाद्र ३, २०७५
सुदर्शनले जे गरे गलत गरे श्रावण २६, २०७५